Izay rehetra momba ny IFA: fandefasana sy zava-baovao natolotra tao amin'ny foara | Androidsis (Pejy 2)
Ny Blackberry KEY2 LE haseho amin'ny IFA 2018
Ny Blackberry KEY2 LE dia haseho amin'ny fomba ofisialy amin'ny IFA 2018. Fantaro bebe kokoa momba ny fampisehoana ny telefaona orinasa vaovao.
Samsung dia ao amin'ny IFA 2018 miaraka amin'ny vokatra vaovao
Samsung dia hanolotra vokatra vaovao ao amin'ny IFA 2018. Jereo bebe kokoa momba ny zava-baovao izay hatolotry ny orinasa amin'ny hetsika any Berlin.
Huawei's Kirin 980 dia azo aseho amin'ny IFA any Berlin amin'ny volana septambra
Huawei, ao anatin'ny famelabelarana marobe izay notanterahiny omaly, dia mety hanolotra ny HiSilicon Kirin 980, ny processeur manaraka an'ny The HiSilicon Kirin 980 dia azo aseho ao amin'ny IFA any Berlin amin'ny volana septambra araka ny lazain'ny tsaho. Manitatra anao izahay!
Ny Honor Note 10 dia haseho amin'ny IFA 2018
Ny Honor Note 10 dia haseho amin'ny 30 Aogositra ao amin'ny IFA 2018. Jereo bebe kokoa momba ny fanolorana ny Honor avo indrindra amin'ny volana Aogositra.
Nanamafy i Sony fa hanolotra telefaona vaovao amin'ny IFA 2018 izy ireo
Hanokatra telefaona vaovao i Sony ao amin'ny IFA 2018. Fantaro bebe kokoa momba ny fanamafisana ny orinasa sy ireo telefaona azon'izy ireo ampidirina.
Ny finday Nokia tsara indrindra dia ho tonga amin'ny IFA 2018
Ny telefaona Nokia tsara indrindra dia haseho ao amin'ny IFA 2018. Jereo bebe kokoa momba ny maodely vaovao an'ny marika izay ho tonga amin'ny tapany faharoa amin'ny taona.
CAT S31, fahatsapana voalohany tao amin'ny IFA 2017
Fihetseham-po voalohany taorian'ny fitsapana ny CAT S31, ny telefaona vaovao an'ny CAT natolotra tao amin'ny IFA 2017 ary manana fanamarinana miaramila 810G
CAT S41, ity no telefaona vaovao tsy simba avy amin'ny CAT
Fiheverana voalohany amin'ny horonantsary rehefa avy nanandrana ny CAT S41, elanelam-potoana iray manontolo izay misongadina amin'ny mari-pahaizana miaramila 810G izay mahatonga azy tsy ho vaky.
Alcatel Idol 5s, notsapainay ho anao izany
Notsapainay ny Alcatel Idol 5s tao amin'ny IFA any Berlin, telefaona iray izay misy mpandahateny an-tariby tsara sy efijery tsara kalitao.
Alcatel IDOL 5, fahatsapana voalohany
Fihetseham-po voalohany tamin'ny horonan-tsary Alcatel Idol 5, telefaona izay efa notsapainay tao amin'ny IFA any Berlin ary miavaka amin'ny famaranana tsara.
Alcatel A7, notsapainay izany tamin'ny IFA 2017
Notsapainay ny Alcatel A7 tao amin'ny IFA Berlin 2017, telefaona antonony izay manana efijery tena tsara sy fakan-tsary eo aloha misy flash LED.
Alcatel A7 XL, fahatsapana voalohany tao amin'ny IFA 2017
Notsapainay ny Alcatel A7 XL tao amin'ny IFA 2017 izay atao mandritra ny herinandro voalohan'ny volana septambra any Berlin. Telefaona tena malina ankapobeny.
HTC U11, fahatsapana voalohany
Fiheverana voalohany amin'ny horonan-tsary taorian'ny fitsapana ny HTC U11 tao amin'ny IFA any Berlin. Telefaona manana famolavolana tokana izay hisarika ny maso rehetra.
Huawei Nova 2 Plus, nosedraina tao amin'ny IFA 17 izahay
Fihetseham-po voalohany taorian'ny fitsapana ny Huawei Nova 2 Plus, telefaona manana efijery 5.5-inch miaraka amin'ny vahaolana Full HD sy vatana vy
Honor Magic, fahatsapana voalohany tao amin'ny IFA 2017
Fihetseham-po voalohany tamin'ny sary taorian'ny fitsapana ny Honor Magic ao anatin'ny booth Huawei sy Honor ao amin'ny IFA Berlin. Telefaona hafa izay hahagaga anao
Fihetseham-po voalohany taorian'ny nanandramany ny Moto G5S Plus, ny kinova vitamina indrindra an'ny fianakavian'i Moto G izay misongadina amin'ny efijery 5.5-mahery mahery.
Moto G5S, notsapainay izany tao amin'ny IFA any Berlin
Fihetseham-po voalohany taorian'ny fitsapana ny Moto G5S tao amin'ny IFA any Berlin, finday vaovao Moto G an'ny fianakaviana Motoola miaraka amina chassis aluminium.
Moto X4, fahatsapana voalohany
Fihetseham-po voalohany amin'ny horonantsary taorian'ny fanandramana ny Moto X4 tao amin'ny IFA 2017 izay atao ao an-tanànan'i Berlin. Mid-range mahavariana.
Sony Xperia XZ1, fahatsapana voalohany
Fihetseham-po voalohany taorian'ny fitsapana ny Sony Xperia XZ1, ilay telefaona vaovao avy amin'ny mpanamboatra Japoney izay manana fakan-tsary mahavariana
Sony Xperia XZ1 Compact, fahatsapana voalohany
Notsapainay tamin'ny horonan-tsary ny Sony Xperia XZ1 Compact, finday vaovao an'i Sony natolotra tao amin'ny IFA any Berlin ary mamela tsiro mangidy mangidy eo am-bavantsika
LG V30, fahatsapana voalohany tao amin'ny IFA 2017
Fihetseham-po voalohany taorian'ny fitsapana ny LG V30, ny sainan'i LG vaovao izay misongadina amin'ny efijery 6-inch mahery miaraka amin'ny 18: 9
Samsung Dex Station, fahatsapana voalohany
Fihetseham-po voalohany amin'ny horonantsary taorian'ny nanandramanao ny Samsung Dex Station, gadget iray izay mamadika ny solo-sainao Galaxy S8, S8 + na Galaxy Note 8 ho lasa solosaina
Samsung Galaxy Note 8, fahatsapana voalohany
Fihetseham-po voalohany amin'ny horonan-tsary sy espaniola taorian'ny fizahana ny Samsung Galaxy Note 8 ao anatin'ny Samsung stand ao IFA 2017 natao tao Berlin.
Samsung Gear IconX, fahatsapana voalohany tao amin'ny IFA 2017
Fihetseham-po voalohany taorian'ny nanandramany ny Samsung Gear IconX, headphones vaovao tsy misy tariby an'ny Samsung izay manana endrika tsy manam-paharoa sy manintona
Samsung Gear Sport, notsapainay izany tamin'ny IFA 2017
Fihetseham-po voalohany taorian'ny nanandramany ny Samsung Gear Sport, ilay famantaranandro fanatanjahantena vaovao an'ny Samsung izay niavaka tamin'ny fanaraha-maso ireo hetsika anaty rano
Cat Phones dia mandefa ny finday avo lenta vaovao mahatohitra tena, Cat S31 ary Cat S41, ao amin'ny IFA 2017
Ny orinasan-telefaona saka dia mandefa fitaovana telo mikitoantoana sy mikitoantoana: Tablette Cat S31 sy Cat S41 ary tablette T20 Caterpillar
Hanitatra any amin'ny mpandahateny sy gadget vaovao hafa ny Google Assistant
Google dia nanambara tao amin'ny IFA 2017 any Berlin fa ny Google Assistant dia hitatra amin'ireo mpandahateny hafa sy gadget marani-tsaina hafa.
IFA 2017: Ireo gadget rehetra izay haseho ao Berlin
Ampahafantarinay anao ny mpanamboatra sy ny gadget vaovao izay mety hiseho mandritra ny foara IFA 2017 kasaina hanomboka tsy ho ela ao Berlin.
Hanomboka amin'ny 30 Aogositra 31 ao amin'ny IFA 2017 ny LG VXNUMX
LG dia mandefa fanasana an-gazety ho an'ny hetsika media vaovao amin'ny 31 Aogositra izay antenaina hanombohana ny LG V30 vaovao
Sony dia afaka nandefa smartphone tsy misy rafitra ao amin'ny IFA 2017
Sony dia hanomana ny fandefasana finday avo lenta finday vaovao tsy misy tabilao miaraka amin'ny efijery enina santimetatra ary ny tahan'ny 18: 9
Ny Samsung Galaxy Note 8 dia afaka manomboka amin'ny IFA 2017 hifaninana amin'ny iPhone 8
Nilaza ny Tale jeneralin'ny IFA Berlin fa ity hetsika voatondro amin'ny volana septambra ity no toerana mety indrindra amin'ny famoahana ny Samsung Galaxy Note 8.
RHA DACAMP L1, CL1 ary CL750, dia gaga anay ny mpanamboatra tamin'ny alàlan'ny fanolorana ny DAC voalohany miaraka amin'ny amplifier azo entina finday ho an'ny smartphone eny an-tsena
RHA DACAMP L1, RHA CL1 ary CL750 no vahaolana vaovao natolotr'i RHA, manilika ny DACAMP ho DAC portable voalohany misy amplifier
Taona maro lasa izay, ny fananana trano manan-tsaina no nofinofy izay tratry ny vitsy. Fa miova ny toe-javatra misaotra ...
SanDisk Ultra USB Type C sy SanDisk Ultra Dual USB Type C, ity no gadget Sandisk vaovao
Izahay dia nanandrana ny SanDisk Ultra USB Type C sy ny SanDisk Ultra Dual USB Type C, gadget roa hampitomboana ny fahatsiarovanao ny telefaoninao amin'ny fifandraisana Type C
TBee, nosedraina ny Box Box miorina amin'ny Kodi izahay
Ireto ny fijerinay horonantsary voalohany taorian'ny nanandramana ny TBee, ilay TV Box vaovao miorina Kodi izay manome fahafaha-manao betsaka
PanzerGlass, mpiaro ny efijery ho an'ny findainao izay manohitra ny famonoana
Mampiseho aminao amin'ny horonantsary ny fanoherana atolotry ny mpiaro ny efijery PanzerGlass, manohitra ny kapoka ataon'ny marotoa, ny fanapahana ary ny karazan-dratsy rehetra!
Moto Z Play, ity no telefaona modular vaovao avy amin'ny Motorola sy Lenovo
Fiheverana voalohany amin'ny horonan-tsary taorian'ny fitsapana ny lalao Moto Z tao amin'ny IFA any Berlin. Fitaovana misy rafitra maodely izay hahagaga anao
Cat S60, nanandrana ny smartphone voalohany izahay tamin'ny fakantsary fahitana hafanana
Fihetseham-po voalohany rehefa avy nanandrana ny CAT S60, finday avo lenta voalohany nanambatra fakan-tsary infrared sy fahitana mafana. Aza hadino izany!
Xperia X Compact, ity no titan kely kely an'i Sony
Notsapainay ny Xperia X Compact an'i Sony tao amin'ny IFA any Berlin. Izahay dia mitondra anao ny hevitsika voalohany momba ny fantsona tena mahaliana
Sony Xperia XZ, araka izany ny sainan'i Sony vaovao
Ireto ny fijerinay horonantsary voalohany taorian'ny nanandramana ny Sony Xperia XZ, ny sainam-piaramanidina vaovao an'i Sony izay mihoatra ny Xperia X Performance
Yoga Book, ny fahagagana lehibe nataon'i Lenovo amin'ity fanontana IFA ity
Nanaitra ny rehetra i Lenovo tamin'ny fanolorana ny Yoga Book, fitaovana iray tena mahaliana izay manana fiasa miavaka sy tsara hiasa.
Hasselblad True Zoom, ity no fitaovana manampy ny Moto Z ho lasa fakan-tsary niomerika
Notsapainay ny Hasselblad True Zoom, fitaovana iray manodina ny Moto Z ho fakan-tsary niomerika noho ny zoom 10x optika sy ny flash Xenon
Moto Z, nisedra ny sainam-pirenena vaovao tao amin'ny IFA izahay
Iray amin'ireo zavatra tsy ampoizina lehibe an'ny IFA any Berlin ny fanolorana ny Moto Z, telefaona maodely vaovao izay hahagaga anao amin'ny famakafakana video ataonay
Samsung Gear S3, fahatsapana voalohany
Aorian'ny fizahan-toetra ny Samsung Gear S3 amin'ny fijoroana Samsung ao amin'ny IFA any Berlin dia entinay anao ny fanombanana voalohany amin'ny famantaranandro tonga tampoka.
Samsung Galaxy Note 7, notsapainay ho anao izany
Notsapainay ny horonan-tsary Samsung Galaxy Note 7 tao amin'ny IFA, ilay phablet vaovao an'ny mpanamboatra Koreana voarohirohy tamin'ny resabe momba ny fipoahan'ny batery sasany.
Lenovo Phab 2 Pro, ity no finday avo lenta voalohany miaraka amin'ny teknolojia Tango
Notsapainay ny Lenovo Phab 2 Pro tao amin'ny IFA any Berlin, finday avo lenta voalohany eny an-tsena manana teknolojia ampy hanatanterahana ny tetikasa Tango
ZTE Axon 7 Mini, fahatsapana voalohany
Ireo no fijerinay horonantsary voalohany taorian'ny fitsapana ny ZTE Axon 7 Mini, ilay telefaona ZTE vaovao izay miavaka amin'ny kalitaon'ny feo
Honor 8, nosedrainay izany tao amin'ny IFA any Berlin
Fihetseham-po voalohany tamin'ny sary taorian'ny fitsapana ny Honor 8 ao amin'ny IFA 2016 any Berlin. Telefaona mahery miaraka amina fakantsary roa miaraka amina mety be
Huawei MediaPad M3, fiheverana voalohany amin'ny horonan-tsary
Toa tsy ampy nanolotra karazana telefaona vaovao ny mpanamboatra aziatika, ny Huawei Nova sy Nova ...
EMUI 4.1, ity no fomba fiasan'ny Huawei miorina amin'ny Android 6.0
Atorinay anao amin'ny horonantsary ny fomba fiasan'ny EMUI 4.1, ny kinova farany an'ny interface Huawei izay miorina amin'ny Android 6.0 Marshmallow ao amin'ny IFA 2016
Huawei Nova Plus, notsapainay ho anao io tamin'ny IFA 2016
Notsapainay ny Huawei Nova Plus tao amin'ny IFA any Berlin. Fitaovana voalanjalanja tena tsara izay napetraka ho iray amin'ireo safidy tsara indrindra eo amin'ny tsena
Huawei Nova, fahatsapana voalohany
Izahay dia manome anao ny fiheveranay ny horonantsary voalohany taorian'ny fitsapana ny Huawei Nova, ilay telefaona Huawei vaovao izay misongadina amin'ny fakantsary eo anoloana 8 megapixel
Lenovo dia manolotra ny findainy K6, K6 Power ary K6 Note ao amin'ny IFA
Tsy misy fampandrenesana betsaka, Lenovo dia nanolotra ny telolahy an'ny K6, K6 Power ary K6 Note smartphone ao amin'ny IFA. Mobiles telo mahaliana amin'ny vidiny ambany.
Ny fandikana vaovao an'ny LG V20 dia mampiseho ny fananganana fakan-tsary roa
Ity fandikana vaovao an'ny LG V20 ity dia mampiseho ny fametrahana fakan-tsary indroa ao ambadiky ny telefaona andro vitsivitsy taorian'ny nampidirana azy.
Sony dia nanambara ny Xperia X Compact, finday kely misy sary mahafinaritra
Ny Sony Xperia X Compact dia natolotra tao amin'ny IFA ary manana efijery 4,6 ", RAM 3GB ary solomaso lehibe iray manontolo ao aoriana.
Huawei dia nanolotra ny takelaka MediaPad M3 8,4-inch ao amin'ny foara IFA any Berlin, izay aseho ho vokatra tsara.
Huawei dia manolotra ny Nova sy ny Nova Plus ho finday antonony roa miaraka amina endrika mahaliana sy endrika manokana.
Ny Xperia XZ sy ny Xperia X Compact Press dia nivoaka tamin'ny alàlan'ny fandefasana
Telefaona vaovao roa, ny Xperia X Compact ary ny XZ, ho an'ny mpanamboatra Japoney izay handefa azy ireo amin'ity tsena IFA izay atao any Berlin ity.
ASUS dia manambara ny ZenPad 3S 10 amin'ny efijery lehibe sy feo amin'ny € 379
Ho an'ny € 379 dia azonao atao ny mividy ny ASUS ZenPad 3S 10 izay hanana fahaizana lehibe amin'ny horonan-tsary sy feo. Tablety natolotra tao amin'ny IFA.
ASUS dia namoaka ny smartwatch ZenWatch 3 ao amin'ny IFA 2016
Izahay dia efa manana ny iray amin'ireo smarwatches amin'ity foibe IFA 2016 ity, ny ASUS ZenWatch 3. Azo ampiasaina eo ambanin'ny Android Wear miaraka amin'ny fanovana ny maso.
Hanambara amin'ny finday vaovao vaovao roa i Archos ao amin'ny foibe IFA any Berlin amin'ny volana ho avy: ny Archos 55 Helium sy Archos 50f Helium.
Samsung modely takelaka Samsung-SM-P950 dia misy S Pen
Ny S Pen dia azo ampiasaina amin'ny takelaka vaovao an'ny Samsung, miaraka amin'ny nomerao modely SM-P950, izay azo inoana fa azo aseho amin'ny seho IFA.
Sony dia miandrandra vokatra marobe amin'ny fanasana ho an'ny IFA 2016
Ny IFA 2016 dia mafana tokoa miaraka amina andian-dahatsoratra ataon'ny mpanamboatra maro, izay isongadin'i Sony.
Ny Samsung Gear S3 dia haseho amin'ny 31 Aogositra
Samsung dia nifidy ny datin'ny 31 Aogositra ho an'ny fampisehoana ny smartwatch Gear S3 vaovao izay hoentina any amin'ny IFA amin'ity taona ity.
Lenovo Vibe S1, telefaona natao ho an'ireo tia selfie
Notsapainay ny telefaona vaovao an'ny Lenovo Vibe S1, ny fakantsary vaovao misy an'i Lenovo miaraka amina fakantsary roa sosona handraisana ireo selfie tsara indrindra
Lenovo Phab Plus, phablet misy efijery 6.8-inch
Izahay dia mamakafaka amin'ny horonantsary ny Lenovo Phab Plus, phablet vaovao an'i Lenovo izay misongadina amin'ny efijery 6.8-inch mahavariana sy ny famaranana kalitao.
Mandinika amin'ny horonantsary ny Siswoo i8 Panther izahay, ilay telefaona vaovao Siswoo izay misongadina amin'ny kalitaon'ny famaranana sy ny vidiny mahaliana: 199 euro
Hodinihinay amin'ny antsipiriany ny tsiambaratelo rehetra an'ny Siswoo R9 Darkmoon, telefaona efijery vaovao izay hifaninana amin'ny YotaPhone 2.
Fihetseham-po voalohany amin'ny horonantsary taorian'ny nanandramany ny Samsung Gear S2, smartwatch izay miavaka amin'ny famolavolana azy sy ny zava-misy amin'ny fampiasana Tizen.
Izahay dia mamakafaka amin'ny alàlan'ny horonantsary Sandisk Wireless Connect, USB azo entina avy any Sandisk izay mamela ny streaming miaraka amina fitaovana telo miaraka.
LG G pad II 10.1, fiheverana voalohany taorian'ny fitsapana ny takelaka LG vaovao
Fandinihana horonantsary feno an'ny LG G Pad II 10.1, takelaka vaovaon'i LG izay misongadina amin'ny famaranana sy ny vidiny namboarina: latsaky ny 600 euro ny vidiny
Alcatel OneTouch Xess, nanandrana ny takelaka 17-inch Alcatel izahay
Notsapainay ny Alcatel OneTouch Xess, takelaka vaovao 17-inch izay hisongadina amin'ny fampiasa sy ny endriny.
Izany no fiasan'ny maody Steady Shot an'ny Sony Xperia Z5
Atorinay anao amin'ny horonan-tsary ny fomba fiasan'ny SteadyShot an'ny Sony Xperia Z5. Fomba iray ahafahanao mampiorina ny sarin'ny horonan-tsary amin'ny fomba miavaka.
Ricoh Theta S, ity no fakantsary vaovao Ricoh 360
Ricoh Theta S dia fitaovana mahaliana hahafahantsika manao horonantsary 360 degre ary mandefa azy ireo amin'ny telefaona
Lenovo Yoga Tab 3 Pro, takelaka tena mahaliana miaraka amina projecteur pico
Izahay dia mamakafaka amin'ny horonantsary ny takelaka Lenovo Yoga Tab 3 Pro izay misongadina noho ny tetikasa pico sy ny famaranana kalitao.
Alcatel OneTouch GO Play, famakafakana video an'ny smartphone Alcatel vaovao
Afaka nanandrana ny Alcatel OneTouch GO Play izahay ary ireto no fiheverana voalohany ho anay
Lenovo Vibe P1, notsapainay ny sainan'i Lenovo vaovao
Izahay dia mamakafaka amin'ny horonantsary ny Lenovo Vibe P1, telefaona Lenovo vaovao izay misongadina amin'ny bateria 5.000 XNUMX mAh sy ny endriny mahafinaritra.
Samsung Galaxy Note 5, mamakafaka azy amin'ny horonan-tsary izahay
Izahay dia mamakafaka amin'ny horonantsary Samsung Galaxy Note 5, mpikambana vaovao ao amin'ny sahan'i Samsung Note hifaninana amin'ny iPhone 6s sy iPhone 6s Plus.
Izahay dia mamakafaka amin'ny horonantsary Sony Xperia Z5 Compact, finday vaovao an'i Sony izay mikendry ny hifaninana amin'ny Apple sy ny iPhone 6s.
Moto 360, ireto ny fientanam-ponay taorian'ny fitsapana azy tao amin'ny IFA 2015
Izahay dia mamakafaka amin'ny alàlan'ny horonantsary ny Moto 360 vaovao, kinova voadio kokoa an'ny maodely voalohany ary manohy miloka amin'ny Android Wear ho toy ny rafitra miasa ao aminy.
Acer Predator 8, nanandrana ny takelaka lalao Acer izahay
Izahay dia mamakafaka amin'ny alàlan'ny horonantsary Acer Predator 8, takelaka vaovao Acer natokana ho an'ny mpihaino gamer ary hahafaly ireo mpilalao izany
Sony Xperia Z5, fahatsapana voalohany
Izahay dia manao fanadihadiana video an'ny Sony Xperia Z5 izay anehoanay anao ny tsiambaratelo rehetra momba ny asa fiasan'ny Sony vaovao
Samsung Galaxy Tab S2, nosedraina ny maodely 9.7-inch
Izahay dia mamakafaka amin'ny alàlan'ny horonantsary Samsung Galaxy Tab S2, ilay takelaka Samsung vaovao misy fakan-tsarimihetsika sy famaranana kalitao.
Samsung Galaxy S6 Edge +, ireo no fiheverana voalohany ho anay
Izahay dia mamakafaka amin'ny horonantsary Samsung Galaxy S6 Edge +, ilay sainam-pirenena vaovao an'ny tandavan Edge izay misongadina amin'ny famaranana sy ny haben'ny efijery.
Huawei G8, fiheverana voalohany amin'ny horonan-tsary
Izahay dia manome anao horonan-tsary iray izay hamakafakanay ny Huawei G8, telefaona afovoany vaovao an'ny Huawei izay misongadina noho ny fakantsary sy ny famaranana premium azy.
Sony Xperia Z5 Premium, nanandrana ny telefaona voalohany tamin'ny efijery 4K izahay
Izahay dia mamakafaka amin'ny alàlan'ny horonantsary Sony Xperia Z5 Premium, ilay sainam-pirenen'ny orinasa Japoney izay misongadina amin'ny efijery 4K manaitra azy
Kitendry LG Rolly, nosedraina ny fitendry LG tsy misy tariby sy horonan-taratasy
Notsapainay ny LG Rolly, ny keyboard vaovao tsy misy tariby LG izay manome fahaleovan-tena manaitra. Halahelo azy ve ianao?
Huawei Mate S, fiheverana voalohany amin'ny horonan-tsary
Izahay dia manome anao famakafakana video ny Huawei Mate S, ny sainan'i Huawei vaovao ao amin'ny faritry ny phablet. Ho afaka amin'ny Galaxy Note 5 na ny Edge + ve izany?
Alcatel dia mamoaka telefaona Go Play tsy misy rano ary azo jerena Go Watch
Fitaovana azo ampiasaina sy finday avo lenta izay miavaka amin'ny fanamarinana IP67 izay manolotra azy ireo hanohitra ny rano sy ny vovoka aseho ao amin'ny IFA.
Alcatel dia manolotra ny takelaka Xess 17-inch ao amin'ny IFA
Alcatel Xess dia natolotra tao amin'ny IFA ho prototype izay ahitantsika takelaka 17-inch izay te-ho foibe multimedia ao an-trano.
Acer Liquid Z: tonga ao amin'ny IFA ireo terminal vaovao midadasika
Ny hetsika IFA dia nitondra ny fanavaozana ny terminal maro, amin'ny tranga Acer dia nanolotra ny faritra Acer Liquid Z vaovao izy ireo.
Moto 360 vaovao sy Moto 360 Sport vaovao
Motorola dia nanolotra ny fitafiany vaovao amin'ny andro voalohan'ny IFA. Moto 360 vaovao misy habe roa sy kinova fanatanjahan-tena, ny Moto 360 Sport.
Ity no Huawei G8 vaovao
Huawei dia nanambara zava-baovao maro tamin'ny andro voalohan'ny IFA 2015, izay isongadin'io Huawei G8 vaovao io, terminal eo afovoany / avo lenta.
Hihaona amin'ny Huawei Watch, famantaranandro maranitra 399 €
Huawei Watch dia azo vidiana manomboka androany amin'ny € 399 amin'ny maodely fototra ary tonga avy amin'ny foara IFA any Berlin.
Ny rehetra momba ny Xperia Z5, Xperia Z5 compact ary ny Xperia Z5 premium
Sony dia mitondra trio smartphone Xperia ho antsika miaraka amin'ny autofocus fakan-tsary haingam-pandeha indrindra eto an-tany, sensor sy fantsom-pifandraisana ary roa andro iainan'ny bateria.
Ity ny Asus ZenWatch 2
Manohy amin'ny vaovao mifandraika amin'ny IFA any Berlin izahay hiresaka momba ny ASUS vaovao azo entina, ny ASUS ZenWatch 2.
Ity ny Archos Diamond Plus
Ny IFA 2015 any Berlin dia efa natomboka ary mpanamboatra maro no nanolotra ny zava-baovao, toy ny Archos Diamond Plus vaovao avy any Archos.
Acer Predator 8 GT-810, nanolotra ny takelaka vaovao ho an'ny mpilalao
Efa nahita ny vaovao sasany isika, toy ny Mate S vaovao avy any Huawei ary ankehitriny anjaran'ny Acer no nanaitra anay nandritra ny fampisehoana azy tamin'ny fampisehoana ny Acer Predator 8, takelaka hilalaovana.
Huawei dia nanambara tamin'ny fomba ofisialy ny Mate S
Huawei dia mitondra antsika finday avo lenta miaraka amin'ny efijery 5,7-inch amin'ny € 649, ny Mate S izay efa nambara tao amin'ny IFA.
ASUS hampiditra smartphone sy smartwatch ao amin'ny IFA 2015
Asus dia nanambara ny valandresaka ho an'ny mpanao gazety ho an'ny 2 septambra ho avy izao ao amin'ny rafitry ny IFA any Berlin.
Samsung dia manamafy ny fanendrena azy ho an'ny IFA 2015: 3 septambra
Nihira izany, efa misy ny latsaky ny IFA 2015, ka orinasa maro no manomboka miantso ny mpanao gazety, toa ny tranga misy amin'ny Samsung.
Huawei Mate 7s dia haseho mandritra ny IFA 2015
Huawei dia manana zava-baovao maro kasaina hatao amin'ny IFA 2015 any Berlin. Ny iray amin'izy ireo dia ny terminal manaraka, ny Huawei Mate 7s izay haseho ao amin'ny foara.
Huawei dia manana smartphone namboarina ho an'ny IFA izay tsy ny Mate 8
Manantena ny rehetra fa hanolotra ny Mate 8 vaovao i Huawei mandritra ny IFA manaraka, saingy na eo aza izany, hitondra ny fitaovana iray hafa ilay mpanamboatra sinoa.
Notsapainay ny Lenovo Vibe X2
Androany izahay manome anao famakafakana horonantsary momba ny Lenovo Vibe X2, ilay sainam-pirenen'ny mpamokatra aziatika.
IFA14: Ny Smartwatch tsara indrindra, ny ratsy indrindra ary ny fahadisoam-panantenana lehibe
Eto aho avelako ianao amin'ny karazana laharana iray, izay ho ahy ny Smartwatch tsara indrindra, ny ratsy indrindra sy ny fahadisoam-panantenana lehibe amin'ity IFA14 natao tany Berlin ity.
SanDisk Connect, ny karazana kapila mafy tsy misy tariby ho an'ny finday avo lenta
Nanatona ny booth SanDisk izahay mba hampisehoana aminao ny faritra misy kapila kapila matevina SanDisk Connect vaovao
Notsapainay ny tabilao Samsung Galaxy Tab Active, takelaka tsy mahazaka an'i Samsung
Lahatsary izay hamakafaka anay ny Samsung Galaxy Tab Active, takelaka faran'izay mahatohitra indrindra an'ny mpamokatra Koreana
Fihetseham-po voalohany amin'ny Moto X vaovao
Ny nampanantenaina dia trosa ka izahay no manadihady momba ny Moto X vaovao
Samsung Galaxy K Zoom, mamakafaka azy amin'ny horonan-tsary izahay
Androany izahay manome anao fanadihadiana video an'ny Samsung Galaxy K Zoom, ilay hybrid eo amin'ny smartphone sy ny fakan-tsary avy amin'ny mpanamboatra Koreana
Notsapainay ny Moto G vaovao, ny elanelany antonony tsara indrindra eny an-tsena?
Afaka nanandrana ny Moto G vaovao izahay ary ny fiheverana dia tsy tokony ho tsara kokoa.
Mandinika ny Samsung Galaxy Tab S izahay
Manararaotra ny IFA 2014 izahay hizaha toetra ary hitondra anao ny famerenana video an'ny Samsung Galaxy Tab S 10.5-inch
Fihetseham-po voalohany amin'ny HTC Desire 820
Androany izahay manome anao famakafakana ny HTC Desire 820, finday avo lenta vaovao avy amin'ny mpanamboatra Taiwanese miaraka amina processeur 64-bit
Samsung Gear VR, nosedraina ny solomaso virtoaly virtoaly an'ny Samsung
Tamin'ny fijoroana Samsung dia nomen'izy ireo fotoana izahay hitsapana ny veran'izy ireo ary anio dia entinay anao ny famakafakana ny Samsung Gear VR
Notsapainay ny Huawei Ascend Mate 7, ilay phablet manify indrindra eo an-tsena
Manakaiky ny fijoroan'ny mpanamboatra aziatika izahay handinihana ny Huawei Ascend Mate 7º
Notsapainay ny Samsung Gear S, ny finday vaovao an'ny Samsung miaraka amin'i Tizen
Hodinihinay ho anao ny Samsung Gear S, ilay smartwatch Koreana vaovao miaraka amin'i Tizen
Notsapainay ny Samsung Galaxy Note Edge, Note 4 miaraka amin'ny efijery miolaka
Izahay dia mitondra anao ny famerenana ny Samsung Galaxy Note 4 Edge, ny finday avo lenta an'ny Samsung vaovao misy efijery miolaka
LG G Vista, famakafakana video
Fanadihadiana video an'ny LG G Vista, phablet vaovao an'ny mpanamboatra Koreana izay ho tonga amin'ny vidiny tena manintona: 399 euro.
Samsung Galaxy Note 4 La Review amin'ny teny Espaniôla
Notsapainay ny Samsung Galaxy Note 4 avy amin'ny foibe teknolojia manan-danja indrindra any Alemana, ny IFA 2014 izay atao any Berlin ny 5 ka hatramin'ny 10 septambra.
Notsapainay ny Samsung Galaxy Alpha, iPhone mpamono vaovao?
Mbola ao amin'ny IFA 2014 izahay ary anio dia atolotray anao ny famakafakana ny Samsung Galaxy Alpha, ilay mpifaninana vaovao amin'ny iPhone 6
Avy amin'ny IFA 2014 izahay dia mitondra horonantsary vaovao momba ny LG G3 Stylus, finday avo lenta vaovao avy amin'ny mpamokatra Koreana.
Fizahan-toetra ny Sony Xperia Z3 Compact, mamakafaka azy amin'ny video izahay
Androany izahay manome anao famakafakana video an'ny Sony Xperia Z3 Compact, terminal iray misy endri-javatra tsy mampino
Notsapainay ny LG G Watch R tao amin'ny IFA14 any Berlin
Avy amin'ny booth LG ao amin'ny IFA 14 no nanandramana ny entana vaovaon'ny orinasa LG G Watch R.
Notsapainay ny Sony Xperia Z3, ireto ny fiheveranay
Androany izahay mitondra anao ny famakafakana video an'ny Sony Xperia Z3, ilay sainam-pirenen'ny orinasa Japoney
Izahay dia mamakafaka ny Sony Xperia Z3 Tablet Compact amin'ny horonan-tsary
Androany izahay manome anao famakafakana video an'ny Sony Xperia Z3 Tablet Compact, takelaka vaovao 8-inch an'ny mpanamboatra
Ohatra amin'ny sary nalaina tamin'ny Motorola Moto X (2014)
Ohatra sary nalaina niaraka tamin'ny Moto X 2014 mampiseho ny kalitaon'ny fakantsary an'ity telefaona Motorola vaovao ity
Alcatel OneTouch Hero, inona no vaovao ao amin'ny IFA ary miaraka amin'ny Android
Alcatel dia nanao ny famelabelarany tao amin'ny IFA 2014, nanolotra takelaka sy smartphone iray avy amin'ny fianakavian'i Alcatel OneTouch Hero, samy Android
ZTE dia manolotra smartphone vaovao telo ao amin'ny IFA 2014
ZTE dia nanolotra ireo maodelin'ny finday avo lenta ho antsika ao amin'ny IFA 2014. Ny maodeliny, ny ZTE Blade VEC 3G sy 4G ary ny ZTE Kiss 3 MAX, maodely ara-toekarena indrindra.
Samsung dia manolotra ny takelaka 8-inch izay afaka manao azy rehetra: Galaxy Tab Active
Ity takelaka Samsung vaovao ity, ny Galaxy Tab Active, dia miavaka amin'ny fahombiazany avo lenta amin'ny fanoherana ny rano, ny vovoka ary ny tontolo iainana.
Huawei dia manolotra ny Ascend G7 miaraka amin'ny famaranana premium sy ny fitaovana
Lahatsoratra izay fantatsika amin'ny antsipirihany ny Huawei Ascend G7 vaovao, takelaka misy famaranana premium sy fitaovana ho an'ny mitaky fatratra.
Huawei dia mampahafantatra ny Ascend Mate 7 miaraka amin'i Octa-Core Chip sy ny Bezels Manipy Be
Ny Ascend Mate 7 dia tsy ampoizina miaraka amina puce valo sy bezela manify
Lenovo dia nanambara ny finday avo lenta 64-bit voalohany: Lenovo Vibe Z2
Ny Lenovo Vibe Z2 dia miavaka amin'ny maritrano 64-bit amin'ny chip sy ny fakan-tsary eo anoloana 8MP haka sary mihetsika tena tsara.
Sony Xperia Z3 Tablet Compact dia ofisialy izao
Ny Xperia Z3 Tablet Compact dia fitaovana mahaliana miaraka amin'ny hateviny ambany, lanja maivana ary efijery 8-inch lehibe
Eto izy: Samsung Galaxy Note 4
Ny Galaxy Note 4 vaovao an'ny Samsung dia eto. Inona no mety ho telefaona tsara indrindra amin'ny taona
Samsung Galaxy Note Edge, ny hatairan'i Samsung
Samsung Unpacked, ny hetsika Samsung dia nahitana fahagagana telo, ny iray amin'izy ireo dia antsoina hoe Samsung Galaxy Note Edge, kinova misy efijery miolaka.
Lenovo dia namoaka ny Tab S8, takelaka 8-bit 64-bit miaraka amin'ny chip Intel
Ny takelaka Lenovo Tab S8 vaovao dia misongadina amin'ny maritrano 64-bitany ao amin'ny chip Intel izay hitondra ny fahafahan'ny Android ho eo am-pelatananao
Sony Xperia Z3 miloko varahina miaraka amin'ny efijery SmartBand Talk misy efijery e-ink
Ankoatra ny loko varahina an'ny Xperia Z3 hita amin'ny sary vaovao dia manana ny brasele smart SmartBand Talk vaovao isika
Ny vidin'ny Galaxy Note 4 dia nambara avy amin'ny Media Markt
Avy amin'ny Media Markt any Russia, dia naseho ny vidin'ny Galaxy Note 4, izay manaraka ny andalana mitovy amin'ilay naoty teo aloha tsy misy tsy ampoizina na aiza na aiza
Round amin'ny tifitra telo an'ny Sony Xperia Z3 Compact
Sony's Xperia Z3 Compact dia miseho amin'ny lafiny feno amin'ny sary vaovao navoaka ny andro talohan'ny premiere eran-tany
Ny ohatra ny sary nalaina tamin'ny Vibe Z2 Pro dia mampiseho izay andrasana amin'ny fakantsary an'ny Note 4
Ny fakantsary tafiditra ao amin'ny Vibe Z2 Pro dia mitovy ihany izay hiseho ao amin'ny Note 4 miaraka amin'ny sary santionany nomena
Manantena mialoha i Sony amin'ny fitaovana Twitter izay hahatratra 2 metatra ny halalin'ny rano anaty
Ny fanamarinana IP68 misy ao amin'ireo terminal Sony vaovao, mamela azy ireo hilentika hatramin'ny 2 metatra lalina araka ny voalaza tao amin'ny Twitter-ny
Sony Smartwatch 3 miaraka amin'ny Android Wear haseho ao amin'ny IFA14
Ary farany, ny orinasa Japoney dia manatevin-daharana ny tarika Android Wear ary hanolotra ny Sony Smartwatch 14 vaovao ao amin'ny IFA3.
Inona no antenaintsika ho hita amin'ny IFA 2014?
Androany izahay mitondra anao lahatsoratra iray miaraka amin'ireo vaovao rehetra andrasana haroso ao amin'ny IFA 2014
Huawei Ascend Mate 7 dia mihetsika ho an'ny fakantsary alohan'ny hanombohana azy
Huawei Ascend Mate 7 dia haseho amin'ny fihaonambe IFA 2014 any Berlin ho avy izao
Ny smartwatch LG G Watch 2 amin'ny volana septambra? [Nohavaozina]
Raha mbola tsy 3 volana akory aza ny G Watch, ny LG G Watch 2 dia haseho amin'ny fihaonambe IFA any Berlin amin'ny volana septambra
Famaritana teknika sy sarin'ny Samsung Galaxy Gear
Ny Galaxy Gear nanaitra dia nanao ny fisehoany ho mpivady tonga lafatra hiaraka amin'ireo Samsung Companion.
Sary ofisialy navoakan'ny Sony Xperia Z1
Hiseho ny Xperia Z1 rahampitso ao amin'ny IFA, foara fanao isan-taona izay atao any Berlin ary hanome ny basy fitifirana amina terminal maro.
Fahitana manaitra amin'ny Street View avy amin'ny trano avo indrindra eto an-tany, Burj Khalifa
Google dia nanolotra avy amin'ny bilaoginy ireo sary malalaky ny vaovao avy any Burj Khalifa, nalaina niaraka tamin'ny fitaovana vaovaony Street View izay tonga hatrany amin'ny toerana tsy heno.